Sida loo badbaadi iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS Xiriirada in Computer
> Resource > iPhone > Sida loo badbaadi Xiriirada ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS in Computer
Weligaa ma ka welwelina sidii iyo si loo badbaadiyo xiriirada iPhone aad si aad u computer sida VCF ama CSV soo gudbiso? Waxaan ognahay in aad u isticmaali karto Lugood in gurmad xiriirada iPhone aad on your computer, halka faylka gurmad waa ka duwan yahay. Waxaad si toos ah u daawan kartaa, iska daa waxaa la isticmaalayo siyaabo kale. Waxaa kaliya ee celin ka Lugood. Lugood aan samayn, taas macnaheedu ma aha ma aad samayn karto. Iyada oo barnaamijkan ah xaq, aan xanuun lahayn oo wax ku ool ah waxaa aad samayn karto.
Waa maxay barnaamijka? Haddii aad tahay qof user Windows ah, waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows iPhone Data Recovery) ; haddii aad tahay qof user Mac ah, Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) waa ikhtiyaarka. Labada iyaga ka mid ah ayaa kaa caawin kara in aad badbaadin xiriirada iPhone in aad PC ama Mac, wax aad u isticmaali iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, ama iPhone 3GS. Waa maxay dheeraad ah, waxaad u isticmaali kartaa si loo badbaadiyo macluumaadka kale ee sida farriimaha, qoraalo, sawiro, videos, abuse wac, jadwalka iyo ka badan si aad u computer. Waxay tahay mid amaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Just leeyihiin isku day ah.
Sida loo badbaadiyo xiriirada iPhone si aad u computer in 3 tallaabo
Waayo, dadka isticmaala Windows iyo Mac, jidka loo badbaadiyo xiriirada ka iPhone xisaabinta waa la mid. Halkan aynu isku day la version Windows ee Wondershare Dr.Fone wada.
Step1. Orod barnaamijka iyo xiriiriyaan iPhone
First of dhan, ordo Wondershare Dr.Fone on your computer, oo uu furmo suuqa hoose ku tusi doonaa sida (halkan iPhone 4 qaado sida tusaale) socota. Markaas xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka, iyo dhaqaaqo tallaabada xigta.
Step2. Ku qor hab iskaanka ka iPhone ayaa si ay u iskaan
Ka dib markii isku xidha aad iPhone in kombiyuutarka (hubiyo in loo abaabuli karaa by your computer), raacna Jidka hoose si aad u soo galaan hab iskaanka ka iPhone ayaa si scan xiriirada aad ku yaal.
1) Click "Start" ee suuqa kala barnaamijka.
2) Isla markiiba riix badhamada Power oo Home aad iPhone ka dib markii button Start.
3) Fur button Power 10 ilbiriqsi (Ha welwelin ka dib. Barnaamijku wuxuu u tirin doonaa idiin ), Laakiinse ay xajiyaan riixaya badhanka Home for kale 15 ilbiriqsi, ilaa aad u sheegay in aad si guul leh ku soo gashay hab iskaanka ah. Markaas barnaamijka iskaan doonaa iPhone sida soo socota.
Fiiro gaar ah: Haddii aad isticmaasho iPhone 5 ama iPhone 4s, in waxoogaa ay kala duwan yihiin halkaan. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad riix badhanka Start ku saabsan suuqa kala hoose iyo sugaan in mudo ah, barnaamijka si toos ah shaqada bidix kuu samayn doonaa, oo waxa kale oo aad heli doontaa suuqa kala iskaanka hoose.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo badbaadin xiriirada iPhone si aad u computer
Marka scan la dhammeeyo, waxaad arki doonaa natiijada ka scan, halkaas oo ay dhammaan xogta laga helay aad iPhone ay si fiican u kala saaraa, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, qoraalo, iyo sidaas. Riix Xiriir dhanka bidix. Waxaad ku eegaan karaan macluumaadka oo dhan, oo ay ku jiraan magac, shirkad, lambarka taleefanka, email, iwm Markaas calaamadee waxa aad rabto iyo Riix Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Xiriirada helay halkan ma aha oo kaliya kuwa hadda aad iPhone, laakiin sidoo kale kuwa dhowaan la tirtiro ka iPhone. Labada iyaga ka mid ah midabo kala gaar ah. Haddii aad rabto in aad u kala sooci, waxaad isticmaali kartaa badhanka: bandhigaan waxyaabaha argagixisanimo tirtiray oo keliya.
5 Solutions in kaabta aad iPhone Photos